डाक्नेश्वरी नपाले भत्तामै खर्चियो ४४ लाख
राजविराज (अस) । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न पारिएको छ । सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को प्रकरण (घ) मा तोकिएको अधिकार अनुसार स्थानीय तहले स्थानीय कर, सेवाशुल्क तथा दस्तुर बढाउँदा सर्वसाधारणलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ ।
शुरूदेखि नै करको चौतर्फी आलोचना भइरहेकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले करको भार कम गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू सुझाउँछन् । तर स्थानीय तहले भने भत्तामै मनलाग्दी खर्चिने गरेको देखिन्छ । सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले १ वर्षमा भत्तामै रू. ४४ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ ।
नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पदाधिकारी बैठक भत्ता, महँगी भत्ता, कर्मचारीको पोशाक भत्तासहितका शीर्षकमा रू. ४४ लाख ६ हजार खर्च गरेको हो । नगरपालिकाको विवरणअनुसार संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँट र सशर्त अनुदान बजेटबाट उक्त रकम खर्च भएको छ ।
नगरपालिकाले राजस्व बाँडफाँट बजेटबाट पदाधिकारी बैठक भत्तातर्फ १० लाख ९७ हजार, पोशाक भत्तामा ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ र अन्य भत्तातर्फ १२ लाख २० हजार खर्च गरेको विवरणमा उल्लेख छ । सशर्त अनुदानबाट स्थानीय भत्तातर्फ १ लाख ९६ हजार र महँगी भत्तातर्फ ७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसैगरी पुनः सशर्त अनुदान बजेटबाट महँगी भत्तातर्फ ४ लाख ८० हजार खर्च गरेको देखिएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा लिने थलो बन्दै रामपुर[२०७६ मंसिर, १८]